10 Iingqungquthela ezinkulu zamaqalo
Kukho umgomo omnye, kunye nenjongo enye kuphela kuloluhlu: ukuba enye okanye ezininzi zale ncwadi ziza kutshintsha umntu ukuba abe ngumshicileli wencwadi yamahlaya.
Ewe, ukukhetha umculi ococekileyo kumhlobo, ilungu losapho, okanye umntu othumelela i-imeyile ebomini bakho unokunyaniseka. Kodwa apha i-10 ayikwazi ukulahlekelwa iincwadi ezinokuthi zibenze zibe ngabadlali bexesha lonke.
Nika ama-comics akho noob ngencwadi malunga no-Jeremy Renner umkhosi olwahlukileyo ovela kwi-Avengers, kwaye unokufumana iimbonakalo ze-quizzical. Tshatisa loo mibuzo ye-quizzical ebonakalayo kumbane wakho wobulungisa, eyazi ukuba iMat Fraction kunye noDavid Aja's Marvel Comics yobuciko bufanelekile umzuzu omfutshane wokungabaza.
U-Hawkeye ulungile kakhulu, kwaye ke ngokobugcisa obuhlukile, ukuba akenzi nto enye kodwa i-Hawkeyes epholile, isikhumbuza wonke umntu ukuba kutheni izinja zihamba phambili, kwaye zenza izinto ezinjenge "Ndikhulu kakhulu ezikebheni" eziqhelekileyo. Hayi, kwaye yandinceda ngokuphefumlela malunga nayo yonke idiosyncratic kunye ne-superhero ekhangayo evela ku-2012 ukuya kuthi. Leyo yilelifa, kwaye ngokukrakra umdlali omtsha onobubele kwi-Comic Marvel.
Ngaphandle kokungathandabuzeki, i-comic fantasy comic ye-2010. I-Rat Queens yenza into engenakwenzeka, ithatha indawo engummiselo waseTolkein kunye nokuyenza ibe yintsholongwane ngokupheleleyo neqela le-bada ** leentombazana elibetha kuqala, kwaye uthetha kamva.
Ukuba awuzange ufunde i-comic, kodwa ujonge i-dash (efanelekileyo, i-heaping) yefayile engafanelekanga ngaphezulu kweeDungeons zakho kunye neeDragons, i-Rat Queens yinto yakho.
Enyanisweni, enye yezona ndawo ezilula ukuqala kubadlali abatsha bee-comics nguStan Lee kunye noSteve Ditko's Amazing Spider-Man, uvula yonke indlela ngo-1962. Nangona le miba yokuqala ye-100 okanye njalo (Ditko ishiya emva kwe-AMS # 38, kodwa i-hits qhubeka beza) bahlala kufuphi neengcamango zebali zeengcamango ezicacileyo, nazo zicaca ngokucacileyo ukususela kuma-1960. Ngoko ukuba ukuhlaziywa kunye nokuxabisa amaxesha akude kulungele abaphulaphuli bakho, bayayithanda lo mlingiswa womntu onguNgcali.
Kuwo wonke umntu, kukho uNksz Marvel. U-Kamala Khan ubuyiselwa kakhulu umdlalo wesikolo esiphakamileyo kunye nesibindi esenza ukuba uPeter Parker abe ngumntu ontand 'umdla kwi-1960. Amaqabane amnandi okuziphatha kwentsha kunye nolunye lweencwadi ezahlukeneyo kwi-Big 2's roster, kwaye akunzima ukubona isizathu sokuba u-Kamala uye wavela kwintsimi yintandokazi yedwa kunye noMbuyiseli ngexesha lokubhala.
Ukuba unqwenela ukuba uHarry Potter angagqiba, kwaye ucinga ukuba uBatman upholile kakhulu, ndikunika ... I-Gotham Academy. Le ngqungquthela-eyenziwa ihlaziyi ilandela ukufika okumangalisayo kweqela labafundi ngaphakathi kwidolophu yaseBatman.
URobert Kirkman ngumdali kunye nomlobi we-Walking Dead, eyona nto ibonwayo kakhulu kwi-TV emhlabeni jikelele. Oko kwathiwa, ukunikezela ngomntu ohambahambayo ohambahambayo ulula kakhulu, kunye nokuba babukela umboniso weTV bazakulindela nolwazi lwento ezayo.
Ngenxa yeso sizathu, sincoma i-Invincible, leyo inika indawo yonke into engaphandle kwendawo ye-Marvel ne-DC ezenza i-movie yethu kunye nezikrini ze-TV. I-Invincible ithatha iziboniso ze-Spider-Man kunye ne-Superman, zibahlalisa ngaphandle kokubangela ukulimala komzimba, kwaye zivela apho kunye neyona nto inokubakho kunye neyobuchule obuhle kwiindawo ezitolo namhlanje.
Ngaba incwadi yakho yamahlaya iyaguqula: a) I-foodie b) Ngokwenene kwi-Zombie okanye c) I-world's greatest guoster?
Ukuba uthe "ewe" nakwezinye zezi zinto, mhlawumbi iincwadi zakho eziguqukayo ziyakuthanda i-Chew, ibali lehlabathi apho zonke izinto eziphezulu zixhomekeke ekudleni, kubandakanya amandla kaDetective Tony Chu ukuba agcine iimbongo zokutya.
Ekuqalekeni, u-Chew uvakalelwa njengencwadi enexesha elifutshane lokuphila, kodwa uJohn Layman noRob Guillory baye bakhela ivesi leNgcaciso elincinci, eliphikisayo, elihleliyo. Ukuba kungekho sizathu esinye, unike umntu ikopi ye-Chew ukuze bakwazi ukuqonda amandla kunye nobushushu bePoyo: I-Warrior Chicken.
Ukuba abalindi abakuthengisi kwiincwadi zemihla yamacwecwe, ngoko sithatha nje inhlanhla. Incwadi yodwa yamahlaya ehlanganiswe kwiNewvelves's Greatest's Novels, ezili-100, iWatchmen iyindwendwe yokukhangela kunye nokukhethwa okuqhelekileyo kwincwadi entsha yokubonisa imifanekiso yexesha lonke.
Kwabalandeli abangakholwayo, banokucinga ukuba bayayazi ibali kwi-movie ye-Zach Snyder, kodwa awuzange uhlangabezane no-Alan Moore kunye neDave Gibbons yobuciko uze uhlale phantsi kunye nekopi ezandleni zakho, kwaye uzive ikethi yewashi ngaphakathi kwamaphepha ayo.
Umdlalo oqhelekileyo kunoma yiyiphi "iidyarki zabantu abangenakufumana uludwe", kunye nesizathu esihle. I-Saga yi-opera yothando yama-opera evela ku-Brian K. Vaughn (Y: Umntu Wokugqibela, Iliso Labucala) kunye ne-Fiona Staples. Kukho izigidi kunye nezinye iidemon, imiboniso yeTV, kunye namafilimu malunga nendawo (jonga kwakhona: i-Star Wars, impembelelo ye), kodwa uSaga ngandlela-thile ulawula ukuziva utsha ngokutsha, ukufaka ingqungquthela yesimanje kunye noyilo lwezinto ezintsha ezinokugqithiswa kakuhle.
Mhlawumbi kubaluleke kakhulu, i-Saga ivakalelwa ngumntu omdala ngendlela eyenza abafundi abatsha bakhuphe ngokukhawuleza "nje". Ewe, kukho i-Planet yeSondo, kodwa le ncwadi inxulumene nothando, kuba ngabazali, imfazwe, kunye nokunye okuninzi.
Ukuba uzama ukuthengisa umntu kwiidiski, kwaye nje kwenzeka ukuba bathande izinto ezinjengokuhleka kunye nokulala ngesondo, ngokuqinisekileyo, awukwazi ukuphosakela ngezoLwaphulo. Kwaye ukuba ayenzeki ukuthanda ezo zinto ... yintoni ?!
Izigwenxa zesondo ziyincwadana enobuninzi beentlobano zesini, kunye nenani elimangalisayo lentliziyo. Inokuqala njengesizathu sokuyila amahlaya esitolo sama-porn, kodwa emva kwemiba embalwa ye-Matt Fraction ne-Chip Zdarsky yenze ezinye zezinto ezinomdla kakhulu zothando kunye nabalingiswa kwiidiski.
Cinga ii-comics akuzona zonke ezoyikisayo? Funda ama-Wytches uze uzame kwakhona. Kungakhathaliseki ukuba yinto ephilileyo yomzimba, okanye idolophu encinci ihambe ingxowankulu embi, uScott Snyder kunye no-Jock bahambisa imiba engama-6 eyoyikisayo eyenza ukuba i-Walking Dead ibonakale njengepikinikini elunxwemeni.
20 Iincwadi zeComic zeZenzo Zonke iifrikhi zeFiliki zifanele zifunde
AbaBashicileli beeNcwadi eziPhambili zeComic
I-Profile Comic Book Publisher
Indlela Yokuba Umbala Wemibala Yobomi
Iincwadi ezili-18 ze-Comic ze-Kids ngo-2018
Ubungqina Bokuvubukulwa Kwimbali Ngebali lika-Abraham eBhayibhileni
IziCwangciso zeMfundo zezifundo
Ngaba ndifanele ndithenge i-Skate Skate I-Child My Runner?
'I-Second Waist Wave'
Amahlaya eTiger Woods
Konke malunga ne-Voice Voice Phenomena (EVP)
Umhla wee-1990 kunye ne-Last Hurray ye-20-Century
Indlela yoba ngumphathi weBhodi yeCharter
I-Funest Enkulu kunazo zonke kwiMbali yoMculo
IJedi Ayikwazi Uthando